Sei Iyo Wiricheya Mushandisi Anogona Kurasikirwa Mapondo
Kurasikirwa neaya mamwe mapaundi se wiricheya mushandisi
Wese munhu anoda kurasikirwa uremu uye funga kuti zvakanyanyisa kuoma kurasikirwa neaya mapaundi. Zvakawanda vanoshandisa wiricheya vanogona kufunga kuti zvakatovaomera kuti vadzikire huremu nekuti vakaganhurirwa mukufamba kwavanogona kuita. Zvinogona kunge zvakaenzana zvakafanana kuonda uremu hwe wiricheya mushandisi nekuti vane mitambo inochinja-chinja kuti ikubatsire kutamba mitambo. Pakupera kwechinyorwa, iwe unenge waziva dzimwe nzira dzekutanga dzaungayedze nhasi kuti utange kubvarura huremu hwacho hwaunofunga kuti unayo. Goverana neshamwari dzako nekuti zvinogona zvakare kuvabatsira zvakanyanya sekugona kwazvinogona kukubatsira iwe.
Ehe, chikafu chakanyanya kunaka kunyanya kana uine chako mhando yaunofarira chekudya. Kana vamwene vako vakaita mhondi isina hunhu Joe saka zvinogona kuyedza zvikuru kuti uwane masekondi pamwe kana chetatu. Kana iwe ukatanga kuendesa simba uye ukatanga kushandisa kutsunga kwako kumisikidza chinangwa nekuchipwanya ipapo unogona kudzikisa huwandu hwemakoriori auri kutora. chikafu chaunohodha kana iwe uchienda kune yekutsanya chikafu chikafu.
Tengesa musoda yako uye unwe zvimwe mvura pachinzvimbo uye zvinokubatsira mune dzimwe nzira dzaunofunga nezvadzo. Soda ine zvakawanda zvakaipa zvinhu kune hutano hwako uye mvura haina. Chengetwa iine mabhodhoro emvura mufiriji yako kuti uchengetewo hydrated futi. Kana iwe uchifunga kuti mvura yakanyatsojeka wobva waedza kuwedzera chidimbu chemoni mukati mayo kana chimwe chinhu kuti chimupe kunaka kwakanaka. Pamwe wedzera zero zero shuga mapoda ane muzvitoro zvakawanda kana kunyange pakona zvitoro.
The kugona kugara achishingaira ikozvino nekuda kwemitambo inochinja ine simba kwazvo uye inobatsira. Iwe unogona kujoina nharaunda uye kutamba nevanhu vazhinji vakasiyana avo vari wiricheya vashandisi zvakare. Tambanudza uye woedza iyo paunotanga yako basa idzva. Kana iwe uchida kuita zvinopfuura kungotamba mitambo wobva wasimudza zvimwe zviyero, tenga mamwe madhiri nekuti anowanikwa chero kupi kana chero imwe nzira yehuremu hwekusimba iwe unogona kusangana nawo.
Kuita kuti mhuri yako ibatanidzwe kunogona kukubatsira nekuti vanogona kukupa iyo rutsigiro iwe ungangodaro uchinzwa sezvaunoda. Kana ivo vachienda kusvika pakubatana newe izvo zvinotori nani. Inokupa iwe mukana wekuva nemumwe munhu kune kusunda iwe kana iwe uchinzwa kuda kurega uye iwe uchivimba iyo yemhuri nhengo. Iyo haifanire kunge iri nhengo yemhuri inogona zvakare kuva shamwari. Shamwari dzinogona kusunda iwe asi ivo vanokwanisa kukusundira zvakanyanya nekuti shamwari dzinowanzoziva kusasimba kwako kupfuura mhuri yako. Tumira mameseji kumhuri yako uye shamwari uye uone kana paine munhu anoda kubatana newe mune yako chinangwa chitsva uye ichakubatsira iwe kuipwanya.
Kufambisa uye kuwanika
Shanda uye Zvazvakaita neWiricheya Mushandisi